မြန်မာနိုင်ငံကနေ တရုတ်နိုင်ငံသို့ တရားမဝင်ပုံမှန် သစ်တင်ပို့နေမှုများဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ခြောက်လအတွင်း သိသိသာသာ ကျဆင်းခဲ့တယ်လို့ လန်ဒန်အခြေစိုက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က ဆိုပါတယ်။ တရားမဝင် သစ်ကုန်သွယ်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ အဓိကကျတဲ့ နေရာတွေကို စောင့်ကြည့်ခဲ့ရာမှာ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် စက်တင်ဘာလက စတင်ပြီး သိသိသာသာကျဆင်းသွားတယ်လို့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အေဂျင်စီ.
အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် ဒေါ်လာ ၈၈၅ သန်း ကူညီရန် ဂျပန်က စီစဉ်နေ
လာမည့် အစိုးရသစ် လက်ထက်တွင် အစိုးရသစ်၏ တောင်းဆိုမှုအရ အထောက်အပံ့နှင့် ချေးငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၈၈၅ သန်း ပေးအပ်သွားရန် ဂျပန်အစိုးရက ပြင်ဆင်နေကြောင်း ဂျပန်တိုင်း(မ်)သတင်းစာက ရေးသားထားသည်။ တရားဝင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ပေးရေး အစီအစဉ် အသေးစိတ်ကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အစိုးရက ဧပြီလတွင် အာဏာရယူပြီးနောက် မကြာမီ.
Infographics, အထူးကဏ္ဍ, ဆောင်းပါးကဏ္ဍ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိက စီးပွားရေးကဏ္ဍများတွင် ဝင်ရောက်နေရာယူနိုင်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီများ၏ လုပ်ငန်းရှင်သူဌေးအချို့အကြောင်း တစေ့တစောင်းကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
မန္တလေးတွင် ဖမ်းမိခဲ့သည့် မူးယစ်ဆေးဝါးများမှာ ယခုနှစ်အတွင်း အများဆုံး ဖမ်းဆီးရရှိမှုဖြစ်
အဆိုပါ မူးယစ်ဆေးဝါးများမှာ ကျပ် ၃၇ ဘီလျံ (ဒေါ်လာသန်း ၃၀)ခန့် တန်ဖိုးရှိသည်ဟု ရဲအရာရှိတစ်ဦးက အေအက်ဖ်ပီကို ပြောကြားသည်
Myanmar Connects အတွက် လက်မှတ်အစောင် ၁၀၀ သာ ရောင်းချမည်
TEDxInyaLake မှ Myanmar Connects အတွက် လက်မှတ်တစ်စောင်လ ျှင် ကျပ်တစ်သိန်းဖြင့် အင်းယားလိပ်ဟိုတယ်တွင် မတ် ၁၃ ရက်နေ့ ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်
ဗဟိုဘဏ်က နိုင်ငံခြားဘဏ်လေးခုကို ထပ်မံခွင့်ပြု
ရန်ကုန်မြို့ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်ခွဲတစ်ခုတွင် ဘဏ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေစဉ်။ ဓာတ်ပုံ- အေအက်ဖ်ပီ ရန်ကုန်၊ မတ် ၅ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘဏ်ခွဲဖွင့်လှစ်ကာ ဘဏ်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် နိုင်ငံခြားဘဏ်လေးခုကို ဗဟိုဘဏ်က မတ် ၄ ရက်နေ့တွင် ထပ်မံခွင့်ပြုလိုက်သည်။ အဆိုပါ ဘဏ်များမှာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ Bank of Investment and Development.
ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ဦးညီပုကို ခန့်အပ်မည်ဟု အင်န်အယ်လ်ဒီ ပြောကြား
ရှမ်းပြည်နယ်အတွက်မူ အင်န်အယ်လ်ဒီပါတီဝင်မဟုတ်ဘဲ အခြား ပါတီများမှ အနိုင်ရ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကို ခန့်အပ်မည်ဖြစ်သည်